“ प्रविधिले गीतकाे स्तरीयता नखस्कियाेस ” « Khoj Raftar
“ प्रविधिले गीतकाे स्तरीयता नखस्कियाेस ”
सांगितिक क्षेत्रको एक सफल नाम हो विपिन घिमिरे । दाङको घोराही–४ गोग्लीमा जन्मिनुभएका घिमिरे अहिले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सस्कृति सस्थान राष्ट्रिय नाचघरमा गायक तथा कलाकारको रुपमा कार्यरत रहदै आउनुभएको छ । उहाँले सृजना गरेका धरै गितहरु बजारमा आईरहेका छन । शव्द छनौट गर्नसक्ने गायक तथा संगीतकारका रुपमा परिचीत घिमिरे संग हामीले केहि सांगितिक भलाकुसारी गरेका छौ ।
स्वागत छ यहाँलाई !
धन्यबाद छ ।
के छ आजभोलीका दिनहरु कसरी वितिरहेका छन ?
म अहिले राष्ट्रिय नाचघरमा गायक तथा कलाकारको रुपमा कार्यरत संगै नयाँ गितसंगित सृजना गर्ने रेकर्ड गर्दे यसरी नेै दैनिकी वितिरहेका छन ।
हजुरको बाल्यकाल कुुन ठाउँ र कसरी विताउनुुभयो ?
मेरो जन्मस्थान दाङ जिल्ला घोराही उपमहानगरपालिका ४ गोग्ली हो । मेरो वाल्यकाल समान्य तरिकाले नै वित्यो ।
गितसंगित क्षेत्रमा कहिले देखि प्रवेश गर्नुभयो ?
मेरो सानैदेखि यस क्षेत्रमा आउने ईच्छा थियो त्यसैले पनि म सानै उमेर देखि गितहरु गाउँने गर्थे । मलाई याद छ घोराहीको दिपशिखा बोडिङबाट एस.यल.सी दिदै गर्दा अन्तिम बिदाइ कार्यक्रममा मैले आफै शब्द र संगित गरेको गित गायको थियो त्यतीबेला मैले सबैको तर्फबाट वा वाई पाएको थिए । त्यसरी मेरो संगितक्षेत्रको सुरुवात विद्यालय तहबाटै सुरुभएको थियो ।
तपाईको परिवारमा गितसंगितको माहोल कस्तो थियो ?
मेरो पारिवारीक माहोल एकदमै संगितमय थियो । नयाँ पुस्ता प्रति उद्धार । मेरो अङंकलहर प्रकाश घिमिरे ,मुनाल घिमिरे,अमर सुबेदी ,डा.गोबिन्द आचार्य लगाएतको टिमले सास्कृतिक कार्यक्रमहरु गर्नुहुन्थ्यो त्यबाट पनि म प्रेरित भए ।
तपाईको प्रेरणाको स्रोत भनेर कसलाई सम्झीनुहुन्छ ?
मैले सम्झीनु पर्दा मेरो परिवारलाई सम्झीन्छु । गुरु गोविन्द प्रसाद श्रेष्ठ , धनवहादुर गोपाली, सत्य-स्वरूप दाइ, नरेन्द्र दाइ, व्याकुल माईला, डा भिमार्जुन आचार्य लगाएत मेरा साथीहरु ।
गितसंगितको शिलसिलामा काठमाडौं प्रबेश कहिले गर्नुभयो ?
स्नातक सकेर स्नातकोत्तर ( मास्टर) को लागि आएको हु । तर रेकर्डिङ को लागि आउने जाने गरिरहन्थे ।
तपाईको जिवनको सुरुवाति गित अथावा एल्वम कुन हो ?
शुरूको गीत २०५७ साल भिमकान्त सि सरको शब्द, डा गोविन्द आचार्यको संगित वैगुनिलाई पनि किन मनले सम्झदैछ …भावना एल्बमको लागि, म्युजिक नेपालमा रेकर्ड भयो। यहि गितबाटै मेरो संगितको औपचारीक सुरुवात भएको ठान्छु मैले ।
आज सम्म हजुरले कति जति गितहरु बजारमा ल्याउन सफल हुनुभयो ?
हाल सम्म बजारमा करिब २ सय जति आएका छन । त्यसमा मैले आवाज भरेको,शब्द,संगित गरेको लगाएत गरेर पुगिसकेका छन ।
लकडाउनमा हजुरका दिनहरु कसरी विते ? अनि यो खाली समयलाई कसरी सदुपयोग गर्नुभयो ?
लकडाउन ठिक चैत ११ गते देखि ३ महिना सम्म पहिले चरणको लकडाउन भयो त्यो बिचमा संगित गर्ने र गित गाउनका लागि मलाई धेरै अफर आयो त्यसपछि म त्यो काममा व्यस्त भए र पछि थोरै लकडाउन खुकुलो भएपश्चात मेरा धेरै गितहरुको काम गरे । अब त्यहिपनि असर त पा¥यो नै किनकी कार्यक्रमको तयारी थियो महोत्सबका कामहरु थिए त्यो सबै ठप्प भयो स्वभाविब असर त पा¥यो ।
तपाई यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेको पनि धेरै समय भयो उसोत तपाई सरकारको स्वामित्वमा रहेको सस्कृति सस्थान राष्ट्रिय नाचघरमा क्रियाशिल हुनुहुन्छ त्यसैले गर्दा पहिलेको र अहिलेको संगित क्षेत्रमा के कस्तो फरक पाउनुभएको छ ?
वास्तवमा पहिलेको र अहिलेको साङगीतिक माहोल धेरै नै परिवर्तन भएको छ । संख्यात्मक धेरै छ तर गुणात्मक कम छ । त्यतिबेला त्यति धैरै प्रविधिको विकास भएको थिएन । जुन ठाउँ दाङमा म हुर्किए त्यो ठाउँमा अझै साङगेतिक माहोल विस्तार हुदैछ रमाईलो गर्ने एउटा पाटो भएपनि त्यसलाई साधना गर्ने र गम्भिरता पुवर्क लिनपनि जरुरी छ । अहिलेको समयमा गितसंगित क्षेत्रमा धरै सजिलो भएको छ । क्षमता भएको व्यक्तिले धरै प्रगति गर्न सक्ने अवस्थाको विकास भएको छ ।
गायक, संगितकार एवम् समग्र कलाकार अहिलेको यो प्रविधि संग जोडिन कत्तिको आवश्य ठान्नुहुन्छ ?
अहिलेको समयमा प्रविधि संग जोडिन विनकै आवाश्यक छ । चाहे त्यो बजारीकरणमा लागि हो या अन्य कुनैका लागि होस । तर प्रविधिसंगै जोडिनका लागि गितसंगितको स्तर भने खस्किनुहुदैन । जस्तो पहिलेका नारायण गोपाल ,भक्तराज आचार्य जस्ता अग्रज कलाकारले गाउने समयमा प्रविधि त्यति थिएन तर पनि उनी गितहरु कालजयी बनेर बसेका छन । तर पनि अहिले प्रविधिसंग जोडिएपनि सृजना उत्कृष्ठ हुन जरुरी देखिन्छ ।
अव यो संगित क्षेत्रमा प्रवेश गर्नचाहाने नव आगन्तु कलाकारलाई तपाई के सल्लाह दिन चाहानुहुन्छ ?
अब म के भन्न चाहान्छुभने यस क्षेत्रमा आउनुस तर आफु बलियो भएर आउनुस किनकी अहिलेको समय भनेको प्रतिस्पर्दाको समय हो सबै भन्दा बढि साधना गरेर आउनुस । देखासिकी को भरमा भनएर आफुले आफैलाई बुझेर आउनुस ।
राज्य तर्फबाट कलाकारहरुलाई कस्तो सहयोग मिलिरहेको छ ?
राज्यको तर्फबाट प्रतिभा पुरस्कार , प्रतिष्ठानहरू गठन, गित नाच संकलन, कला प्रशिक्षण सास्कृतिक महोत्सव भएका छन। रोयल्टि सम्वन्धि व्यवस्थापन जरूरि छ। जस्तो अहिले हामीले दाङकै नारायणपुरमा कलाकार प्रशिक्षण कार्यक्रम पनि गर्दै छौ । त्यसैले सहयोगका कामहरु भईरहेका छन ।
अन्त्यमा तपाईका सृजनाहरु आउने तयारी के कस्ता छन ?
एउटा एल्वम तयार भएको छ ,त्यसमा केहि फुट्कर गितहरु पनि तयार भएका छ । गितकार सियरा आचार्यको एल्बम तिम्रो प्रेरणाले सत्यराज आचार्य प्रमोद खरेल नरेन्द्र प्यासि दाइ हरूका भिजुअल आउन वाकिरहेको छ ।
हाम्रो तर्फबाट तपाईलाई शुभकामना छ तपाईको सृजनाले सफलता पाउन र अन्त्यमा मैले सोध्न छुटाएको र हजुरले भन्न चाहेको कुरा केहि छ ?
अन्तमा हजुर लगायत सवै टिमलाई धन्यवाद।।
प्रकाशित मिति : २०७७ पुष २२ गते बुधवार
कुराकानी सँग संबन्धित
सीमासम्बन्धी कार्यदलले बुझायो परराष्ट्रमन्त्रीलाई प्रतिवेदन
गुल्मीमा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु, दुई घाइते
आज आईपीएलमा दिल्ली र बेङ्ग्लोर खेल्दै
सल्यानमा एक बालक बेवारिसे अवस्थामा जंगलमा फेला
गुल्मीमा छोराको कुटपिटबाट बुवाको मृत्यु
‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’को सिजन २ मा अध्यक्ष करिष्मा मानन्धर